Rano Ganirelix Acetate (129311-55-3) mpanamboatra - Phcoker
SKU: 129311-55-3 Sokajy: Peptide
Rano Ganirelix Acetate voly (129311-55-3) video
Rano Ganirelix Acetate vovoka (129311-55-3) Description
Ny ganirelix Acetate Rano Ganirelix dia ny endriky ny sazeta acetate amin'ny ganirelix, ny dekapeptide synthetic izay misy fihetsika mahery vaika manohitra ny hormone gonadotropine (GnRH) azo avy amin'ny natiora. Ny Ganirelix mivantana dia mifaninana amin'ny GnRH ho an'ny mpandray ny fifandraisana eo amin'ny vozona aforitra, ka miteraka haingana sy mivadika ny fanafahana ny hormone (FSH) ary ny hormone hormone (LH). Io fitaovana io dia ampiasaina amin'ny fikosehana ny fiatrehana LH taloha amin'ny vehivavy mifehy ny fihoaram-peo mifehy ny aretin-koditra, ary miaraka amin'ny hormones hafa amin'ny fikarakarana ireo vokatra matanjaka amin'ny fangirifiriana amin'ny vitamin.
Rano Ganirelix Acetate (129311-55-3) Specifications
Product Name Rano Ganirelix Acetate vovoka
Anarana simika N-Acetyl-3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-4-chloro-D-phenylalanyl-3-(3-pyridinyl)-D-alanyl-L-seryl-L-tyrosyl-N6-[bis(ethylamino)methylene]-D-lysyl-L-leucyl-N6-[bis(ethylamino)methylene]-L-lysyl-L-prolyl-D-alaninamide diacetate
molekiolan'ny Formula C84H121ClN18O17
molekiolan'ny Wvalo 1690.45
Solubility 0.25mg / ml ~ 30mg / ml amin'ny DMSO sy DMF
Application izay ampiasaina amin'ny fisakanana ny fihenan'ny LH aloha vao haingana amin'ny vehivavy mifehy ny fihoaram-peo mifehy ny aretin-koditra, ary miaraka amin'ny hormones hafa amin'ny fikarakarana ireo vokatra matanjaka amin'ny famoahana amin'ny vitamin.
1 famerenana for Rano Ganirelix Acetate (129311-55-3)
Ny ganirelix Acetate vovoka mba hitsapana, hizaha ny vokatra vokatra tena avo lenta sy madio!
Rohamena GHRP-6 (87616-84-0)
Ny Rohdy GHRP-6 roapolo dia hormone sy hendrofan'ny hormonina mamoaka hexapeptide, vita amin'ny asym amino amina. Ity peptide ity dia iray amin'ny maro .........